बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, बीमाको विषयमा अनविज्ञ छन् कृषकहरु ! « News24 : Premium News Channel
बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, बीमाको विषयमा अनविज्ञ छन् कृषकहरु !
ओखलढुंगा । सरकारले कृषकहरुको पशुवस्तु तथा बालीनालीमा संभावित कारणले हुने क्षतीको असरलाई न्युनिकरण गर्न पशु तथा बाली बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर उक्त कार्यक्रममा ओखलढुंगामा प्रभावकारी देखिएको छैन् । पशुवस्तु तथा खेतीपातीमा संभावित जोखिमका कारण क्षती हुने भएकोले त्यसलाई न्युनिकरण गर्न जिल्लामा ०७२ साल देखि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको भएपनि कृषकहरुमा जानकारी नहुँदा सो कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको हो । ग्रामिण समुदायमा कृषकहरुले व्यवसायीक रुपमै पशुपालन तथा तरकारी खेती गरिरहेको भएको बीमाका विषयमा भने अनविज्ञ छन् ।
मोलुङ गाउँपालिका ४ हर्कपुरका राम प्रसाद खतिवडाले खेती तथा पशुबस्तुको वीमाका बिषयमा अफुले नसुनेको बताए । ‘यत्रो बालीनाली पनि लगाईन्छ दुईचार ओटा भएपनि पशुबस्तु छन् तर यसको पनि बीमा हुन्छ भन्ने चाहीँ थाहा थिएन’ उनले भने । ‘बीमाका विषयमा जानकारी भए आफुले पनि गर्दै आएको बालीनाली तथा भएका पशुबस्तुको बीमा गर्थे’ ।
खतिवडा त एक प्रतिनिधी मात्र हुन जिल्ला बिमाका बिषयमा अधिकाशं कृषकहरु अनविज्ञ छन् । जसले गर्दै संभावित दुर्घटनाका कारण कृषकहरुले लाखौको क्षती व्यहोर्न बाध्य छन् ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ ओखलढुंगाका अनुसार जिल्लाका कृषकहरुमा वीमाका बिषयमा जानकार नै छैनन् । ‘हामिले बाली तथा पशु वीमाका बिषयमा कार्यक्रम नै बनाएर समुदायमा जाने गरेका छौं तर नागरीकमा त्यसको ज्ञान नै नभएको पाईयो’ राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ खाद्य अधिकार परियोजना जिल्ला परियोजना अधिकृत मुना बिकले भने ।
‘बिमाका बिषयलाई लिएर समुदायमा पुग्दा कृषहरुमा रुची भने प्रश्स्त रहेको पाईयो ।’ हाल महासंघले समुदाय लक्षित १ सय २० समुह मध्ये ३८ ओटा समुहमा बाली तथा पशु वीमा सम्बन्धी जानकारी मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
वीमा कार्यक्रम कृषकहरुले व्यसायीक रुपमै लगाएका तरकारी, फलफुल, धान, मकै लगायतका बालिनाली तथा पशुपंक्षीमा लागु हुन्छ । त्यसमा कृषकको २५ र सरकारको ७५ प्रतिशत सम्म लगानीमा हुन्छ । तर ओखलढुंगा जिल्लामा हाल सम्म बालीतर्फ एकजनाले पनि वीमा नगरेको एनबी ईन्स्युरेन्सका ब्रान्च म्यानेजर खुरहरी दाहालले बताए ।
पशुतर्फ भने जम्मा ३ हजार हाराहारीले मात्र वीमा गरेका छन् । ‘यहाँ वीमा गर्ने कृषकहरुको संख्या एकदमै न्युन छ’ दाहालले भने । ‘बिमाका लागी पुग्दा कृषकहरुबाट वीमा गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै धेरै आउने गरेको छ ’।
कृषकहरुले वीमा गरिहाले पनि उनिहरुले गर्ने मुल्याङकण हाई हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘हाम्रो पनि कम्पनीको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ तर कृषकको आशा भने बढी हुने गरेको छ ।’
जिल्लामा आधिकारीक रुपमा एनबी ईन्स्युरेन्स पशु तथा बालीनालीको वीमा गराउँदै आएको छ ।
सरकारले कृषीमा लागानीको नारा अगाडि सारीरहेको बेला कृषी तथा पशु वीमालाई पनि सँगसँगैै लैजानुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ । हाल राज्य पुनसंरचना संगै स्थानिय तहले जिम्मेवारी पाएकाले त्यसतर्फ स्थानिय तहले पनि ध्यान दिनुपर्ने उनिहरुको भनाई छ ।